Diego Costa oo sheegay inuu iminka helay taageeradii uu u baahnaa kaddib… – Gool FM
Diego Costa oo sheegay inuu iminka helay taageeradii uu u baahnaa kaddib…
Byare September 6, 2016
(Spain) 06 Sebt 2016. Taageerayaasha xulka Spain iyo saxaafada ayaa weeraryahanka Chelsea Diego Costa ku dhaleeceynayay bandhigiisa liita ee dhanka ciyaaraha caalamiga ah.
Costa ayaa xalay boorka iska jafay isla markaana tusay taageerayaasha inay ku qaldanaayeen inay dhaleeceeyaan kaddib labo gool iyo waliba ciyaar cajiib ah uu soo bandhigay kulankii uu xulka Spain 8-da gool ku xaaqay xulka Liechtenstein isreeb-reebka koobka adduunka ee 2018.
“Ma ahan oo kaliya tababaraha laakiin sidoo kale saaxiibadeyda kooxda marna igama tagin oo had iyo jeer way i taageerayeen,” Costa ayaa sidaa ku jawaabay mar la waydiiyay inuu iminka helay taageerada uu u baahnaa.
“Iminka howsha si fican ayay iigu socotaa aniga.
“Waqti adag ayaan soo qaatay, weeraryahanku wuxuu u baahan yahay goolal laakiin waxaan iminka u maleynayaa inaan wax badan ku lug leeyahay kulanka waana ogaa inay goolashu iman doonaan.
“Marna kama caban doono saaxiibadeyda kooxda. Waa inaan uga mahad naqaa iyaga sida ay markasta ii taageerayeen aniga.
“Dhaleeceyntu waa caadi maxaa yeelay wax badan ayaa markasta laga doonayaa ciyaartoyda caalamiga.”.
Laurent Koscielny oo ku guulaystay laacibka bisha ee kooxda Arsenal
MIDEE KU LEH: Isbar-bar dhig 2-koox oo laga sameeyay xiddigaha ay wakiilada u kala yihiin Mino Raiola iyo Jorge Mendes….(Ronaldo and Di Maria VS Pogba and Ibrahimovic)